787-800 dhibaato pack ahee.
Su'aal 787-800 dhibaato pack ahee.
1 sano 10 bilood ka hor #632 by ricsmi
Hello oo dhan, waxaan dhawaan bilaabay ciyaaro FSX SE oo run ahaantii ku riyaaqayaa.
Waxaan kaliya ku rakiban TDs 787-800 baakada ahee iyo dhibaatada kaliya ee i la qabto waa in mid ka mid ahaa button qol iyo burooyinkoodii shaqeeyaan VC, waxaan duuli diyaarad oo dhan aan VC, iyo tan waxaa lagu dilay diyaaradaha this ii sida i ma taagnaan karo qol 2d ah.
Kasta guys fikrado?
1 sano 10 bilood ka hor #633 by Gh0stRider203
sidoo kale tan iyo waa shimbir engine 2, run ahaantii waan garanayaa VC ah waxaad isticmaali kartaa. waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo diyaarad oo dheeraad ah, laakiin waxa ay noqon doontaa u qalantaa
waxay ku tusi doonaa sida loo bedelan baxay VC ah
VC ee this mid ka mid ah waa halkii fiican. Anigu ma aan runtii u isticmaali ha laakiin waa functional
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: ricsmi
1 sano 10 bilood ka hor #634 by ricsmi
mahad Waayahay Waxaan qaadan doonaa eegno, helay dhibaato kale, i kaliya ogaaday in aragtida bannaanka waxaa jira gaari xamuul ah maandooriyayaasha badan oo ku lifaaqan diyaarada.
Sidee baan uga takhalusi karaa in sida ay u egtahay doqon ah oo kaliya clip jidka default ka mid ah.
1 sano 10 bilood ka hor #635 by Gh0stRider203
Kii ugu horreeyey VC, NOW stowaways? u muuqataa in aad sida ma qaadi kartaa nasasho! LOL
oo aan hubin, si daacad ah ma ihi. Anigu ma duuli 787 ku aadan (772LR uu leeyahay awood fiican oo kala duwan). wax KALIYA Waxaan u soo jeedin karaa waa inuu fiiriyaa darfaha hoostooda si ay u arkaan haddii ay jirto suuqa kala utility ah. Waan ogahay qaar ka mid ah shimbiraha Project Open Sky leeyihiin in.
1 sano 10 bilood ka hor #640 by ricsmi
Ka dib markii reading iyada oo loo marayo ii akhri waxa ay sheegtay in uu jiro guddi Utility in damin kartaa xooggu ah, guddiga waa inay muujiyaan ka dib markii riixaya ctrl + 7 laakiin isnt in mid ka shaqeeya.
Kasta mishinka fikrado?